Diyaarda Milatari Oo Ku Dhacday Garoonka Diyaaradaha Ee Magaalda Xudur – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imanaya degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in diyaarad ay leeyihiin Milatariga Itoobiya ay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha Dagmada Xudur ee xarunta Gobalka Bakool.
Diyaaradda ayaa la sheegay in nuuceedu uu ahaa kuwa sida qumaatiga ah u kaca ee loo yaqaan Helicopter waxayna sahay u siday ciidamada Milatariga Ethiopia ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Sarkaal u hadlay ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in aysan wax khasaare ah oo ka dhashay shilka diyaarada,marka laga reebo in diyaaradda burbur kooban soo gaaray.
Illaa iyo hadda lama oga sababta keentay burburka diyaarada mana jirta cid ka tirsan maamulka Koofurgalbeed oo ka hadashay shilka diyaarada.
Ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala dalka Soomaaliya oo ku sugan gobolada dalka ayaa waxaa sahayda iyo wax walba oo ay u baahan yihiin badanaa lagu geeyaa diyaarado.